बालबालिकामा मोबाइल प्रयोगको लत छुटाउन अभिभावककै पहल जरुरी | Safal Khabar
बालबालिकामा मोबाइल प्रयोगको लत छुटाउन अभिभावककै पहल जरुरी
विहीबार, ०७ साउन २०७८, ०८ : ०६
काठमाडौं । बालबालिकालाई मोबाइल प्रयोगको लतबाट छुटाउन अभिभावकले नै पहल गर्नुपर्ने सुझाव विज्ञहरूको छ । कोभिड–१९ को महामारीका कारण अहिले डिजिटल प्रविधिको सिकाइ, सामाजिकीकरण र मानसिक स्वास्थ्य व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको अवस्थामा अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई सावधानीपूर्वक मोबाइलको प्रयोग गर्न प्रेरित गर्नुपर्ने बाल मनोरोग विशेषज्ञ डा. गुञ्जन घोजूको भनाई छ ।
बालबालिकाले कुन अवस्थामा इन्टरनेट चलाइरहेको छ भन्ने बुझ्न जरुरी रहेको डा. घोजूको भनाइ छ । कुनै मानसिक तनावले पनि यस्ता प्रविधि बढी समयसम्म चलाउने गरिन्छ । उहाँले थप्नुभयो, “बालबालिकालाई के भइरहेको छ भन्ने कुरा अभिभावकले मायाले सोध्नुपर्छ ।” अभिभावकको भनाइ बालबालिकाका लागि प्रेरणाको स्रोत हुन्छ । बालबालिकालाई आफूसँगै सिर्जनात्मक काम गर्न प्रेरित गर्न सकियो भने इन्टरनेट चलाउनमा ध्यान कम जाने उनको सुझाव छ ।
दृश्यमा देखाइने हत्या, हिंसाका चित्रले बालबालिकामा नजानिँदो तरिकाले असर पार्ने रघुवंशीले बताए । उनले भने, “एकदेखि डेढ घण्टाभन्दा बढी समय मोबाइलमा बिताउनु वयस्कका लागि पनि खतरा हुन्छ भने बालबालिकाका लागि त झनै खतरा हुन्छ ।”
डाक्टरको प्रमाणपत्र कीर्ते गरेको आरोपमा युवक पक्राउ
चीनबाट आयो ८ लाख डोज खोप ,थप खोप लिन आज जहाज जाँदै